Global Voices teny Malagasy » Bengladesy: Mampianatra ny Zaza Madinika Hiteny Teny Vahiny sy Handainga Ve Ny Sarimiaina? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jolay 2012 6:10 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, India, Fanabeazana, Fiteny, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Zavakanto & Kolontsaina
Niteraka adihevitra tany Bengladesy ny sarimiaina iray nalefan'ny Fantsom-pahitalavitra Disney any India . Doraemon  no anaran'ity sarimaina Japoney (nadika ho amin'ny teny Hindi) ity. Maro no mitaraina fa manosika ny zaza hianatra ny teny Hindi an'ny tany mifanila vodirindrina amin'i Inde, ity sarimiaina ity, ary mahatonga azy ireo handainga. Maro ireo zaza Bengladesy no manaraka ity sarimiaina ity, izay mandeha foana ary koa miverimberina matetika.
Ho azonao tsara ny antony mahatonga azy ireo ho lasa adala amin'i Doraemon rehefa mamaky ny tantaran'ny reny iray sorena ao amin'ny The blog of a Mom  [bn] ianao:
Reny iray hafa nandefa lahatsoratra tamin'ny Daily Prothom Alo  [bn] hoe:
Sarimiaina Japoney izay nalaina tamina fandaharana Manga malaza izay nanjary andianà sarimiaina taty aoriana i ‘Doraemon’ . Miverina avy any amin'ny taonjato faha 22 ny robot saka tsy misy sofina Doraemon mba hanampy mpianatra zazalahy, Nobita Nobi. Eto no manomboka ny tantara.
Milaza i Kanak Barman  [bn] ao amin'ny Somewhereinblog:
Etsy andaniny, manakiana ny tsy fisian'ny fandaharana malaza ho an'ny ankizy amin'ny fiteny Bangla ao amin'ny fahitalavitra amin'ity zava-miseho ity i Shahriar Shafique  [bn] ao amin'ny BlogBDNews24.com :
Misy fantsom-pahitalavitra maherin'ny 20 ao Bengladesy fa tsy manana fandaharana ara-dalàna sy ara-kalitao hoan'ny ankizy izy ireo. Raha ny tadidiko aloha dia nisy telo ny fandaharana tsara toy ny Sisimpur , Meena , ary ny Moner Kotha izay alefan'ny BTV indraindray isan-kerinandro. Mandefa ny sarimiaina Meena ihany koa ny Desh TV, ary ny fantsona hafa mandefa ny sarimiaina Tom & Jerry. Malaza ireo sarimiaina vitsivitsy ireo saingy alefa anaty fotoana fohy monja. Ny androtokon'andro dia ny fandaharana hafa toy ny laharana horonantsarimihetsika, vaovao, resadresaka mivantana, fandaharana momba ny sakafo sy fifaninana ara-talenta no mandeha; izay tsy mitondra vokany firy amin'ny ankizy madinika. Resadresaka mivantana izay tsy misy azon'ny zaza madinika, resaka amin'ny fanaovan-dakozia na fitiavana- tantaram-pitiavana- hatsikana izay tsy manintona zaza madinika akory.
Mihevitra ny mpitoraka bilaogy Fahmidul Haque  [bn] fa tsy horohoro ho an'ny fiteny Bangla i Doraemon:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/05/34891/
 Fantsom-pahitalavitra Disney any India: http://www.disney.in/DisneyChannel/
 The blog of a Mom: http://amarblog.com/fahmidaali/posts/147915
 Kanak Barman: http://www.somewhereinblog.net/blog/kanakbarman/29555757
 Shahriar Shafique: http://blog.bdnews24.com/Shahriaque/79327
 Fahmidul Haque: http://www.somewhereinblog.net/blog/fahmidulhaqblog/29572100